युगसम्बाद साप्ताहिक - आफैं जान्ने बुझ्ने हुनुहुन्छ नी ! धेरै के लेखौ - महेश्वर शर्मा
Monday, 01.27.2020, 05:15pm (GMT+5.5) Home Contact
Wednesday, 04.10.2019, 10:57am (GMT+5.5)
यहाँ समस्या धेरै छन् । प्रश्न पनि धेरै छन् । तिनको समाधान र उत्तर भाषण र ओठे जवाफबाट सम्भव छैन । जनअसन्तुष्टिको ओखती हप्कीदप्की होइन, कामै गरेर मात्र सन्तुष्टि दिन सकिन्छ । आज जनअसन्तुष्टि व्यापकरुपमा बढ्दो छ । त्यसलाई समन गर्ने–गराउने दायित्व सरकारको हो । तर सरकार जनतालाई ओठे जवाफ दिएर धम्क्याएर तह लगाउन खोज्छ भने स्वीकार्य हुन सक्दैन । पशुपति शर्माको गीतले आजको यथार्थ चित्र प्रस्तुत गरेको हो । जनअसन्तुष्टिको विरेचन हो त्यो । त्यसको मर्म बुझेर काम गर्नुसट्टा गीतलाई प्रतिबन्ध लगाउँदा विपरीत असर परेको छ ।
भकुण्डोलाई जति अँठ्याउन–दबाउन खोज्यो उत्ति नै उफ्रन्छ । पशुपतिका गीत सरकारले यूटुबबाट हटाए पनि बज्न छोडेको छैन क्यारे । बरु जनताले खोजीखोजी सुनिरहेका छन् । राजमार्गहरुमा गुड्ने यातायातका साधनमा तिनै गीत बजिरहेका छन् । यसबाट के बुझ्नुपर्छ भने असन्तुष्टिको उपचार प्रतिबन्ध होइन रहेछ । कामै देखाएर मात्रै जनताको चित्त बुझाउनुपर्ने रहेछ । ‘क्रिया केबलमुत्तरम्” अर्थात् जनअसन्तुष्टिठको उत्तर कामै गरेर मात्र दिन सकिन्छ, बलजफत अँठ्याउन खोजेर हुँदैन ।
सरकार चाहिने नै सुशासनका लागि हो । सुशासन भएन भने स्थिति अराजक पनि हुनसक्छ । देशमा अराजक स्थिति उत्पन्न हुन नदिने दायित्व बोकेको सरकारहरु नै अराजक भए भने के हुन्छ ? आज लगभग त्यस्तै स्थितिको आभास हुँदैन । शासकले नै बाटो बिराउँछन् भने अरुलाई उपदेश दिनुको अर्थ रहँदैन । गुरुको गल्ती चेलाले अनुशरण गर्ने नै भए । गुरुको योग्यतामा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । चुनिएर आउँदैमा कोही पनि सर्वगुणसम्पन्न हुँदैन, आत्मनिरीक्षण पनि गर्नुपर्दछ म कति सक्षम छु भनेर । भ्रष्टाचार सहन्न भन्ने, तर भ्रष्टाचारकै आहालमा रमाएर उपदेश दिंदैमा जनतालाई पत्याउन गाह्रो पर्छ ।
भ्रष्ट आचरण गर्नेहरु, आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नहरु, तस्कर व्यापारी, धर्मका नाममा राजनीति गर्नेहरु, कमिशनखोर, ठेकदार, दादा र दलाल, बिचौलिया, कालाबजारिया, सिण्डिकेट र कार्टेलिङ चलाउनेहरु सत्ता राजनीतिका आडमा आज चम्केका छन् भने सर्वसाधारण जनता कठ्यांग्रिएका छन् । सत्ताधारीले आफ्नै पक्षको मात्र हित हेर्ने हो भने न्याय हराउँछ र हराइरहेको छ । दुष्टलाई दण्ड र सज्जनको सुरक्षा राज्यको धर्म हुनुपर्नेमा यहाँ विपरीत भैरहेको छ । आजका तहतहका सरकारका शासक गोठाला नभएका छाडा बस्तुभाउसरह कर्तव्यविमुख भएको अनुभव जनताले गरेका छन् भन्ने यथार्थबोध प्रधानमन्त्रीजीलाई नभएको त पक्कै छैन होला ।
आजका शासकलाई स्वार्थले बाटो छेकेको हो कि कुन्नि, राष्ट्रको साधनस्रोत सर्वसाधारण जनताको हितमा भन्दा निजी सुख सुविधा र सम्पन्नताका लागि प्रयोग भएको त छैन ? भनेर दृष्टि पु¥याउने र सच्याउन लगाउनेतर्फ प्रधानमन्त्री स्वयंले फुर्सद पाउनुभएको छैन जस्तो अनुभव भैरहेको छ । पुराना कुरा नसुन्ने प्रवृत्ति बढिरहेको बेला महर्षि आत्रिको राज्य संचालनबारेको एउटा उक्ति उधृत गर्दैछु–
“दुष्टस्य दण्डः सुजनस्य रक्षा न्यायेनकोषस्य च सम्प्रबृद्धिः
अपक्षपातोऽर्थिषु राष्ट्ररक्षा पञ्चैव यज्ञाः कथिता नृपाणाम ।।”
अर्थात्– राजाले (आजका सन्दर्भमा सरकारले) गर्नुपर्ने पाँच यज्ञ छन् । पहिलो यज्ञ भनेको दुष्टलाई दण्ड । दोस्रो सज्जनको सुरक्षा । तस्रो न्यायपूर्वक राष्ट्रकोष बढाउनु । चौथो सेवाग्राहीप्रति पक्षपातरहित व्यवहार र पाँचौं यज्ञ भनेको राष्ट्रको स्वतन्त्र अस्तित्व बचाउनु । यी पाँच यज्ञ सरकारका मूल कर्तव्य मानिएका छन् ।
आजको स्थिति हेर्दा सज्जनले सुरक्षा र दष्टलाई दण्ड दिने प्रक्रिया नै बिरोधाभाष अनुभव भैरहेको छ । राज्यकोष बढाउने विषयमा पनि जनताको सामथ्र्य विपरीत बलजफ्त कर असुल्ने काम भएको छ । सेवाग्राहीप्रति पनि आफ्नो पार्टीको र अरुको भनेर भेदभावपूर्ण व्यवहार भैरहेको अनुभव जनताले गरेका छन् । अन्तिम यज्ञ राष्ट्र रक्षा पनि संकटापन्न नै छ । सिमाना मिचिएका छन्, अतिक्रमण बढ्दो छ । बाहिरबाट असंख्य मान्छे बैरिएका छन्, कुनै अभिलेख छैन । नागरिकता मनपरीसंग दिइएको छ । नेपाली नै आफ्नो देशमा अल्पसंख्यामा पर्ने संकेत देखिइरहेका छन् । नेपाललाई सधैं पराधिन बनाइराख्न खोज्ने बाह्यतत्वकै प्रभावमा नेताहरु छन् । यसतो अवस्थामा देशक कसरी अडिएला भनेर सोच्नुपर्ने भएको छ ।
पृथ्वीनारायण शाहकै भनाई नपच्नेहरुलाई त्योभन्दा अघिकाको भनाई पच्ला नपच्ला, तैपनि महर्षि वाज्ञवल्क्यको भनाई पनि राख्न मनलाग्यो । याज्ञवल्क्यले पनि घुस्याहा (उत्कोचजीवी)को सर्वश्व नै हरण गरी देशनिकाला गर्नुपर्छ भनेका छन् । तर कसले सुन्ने ? त्यस्तै हिजोआज फेरि पैसाकै लागि कम्युनिष्टहरुले पनि सप्ताह पुराण लगाउन थालेका समाचार सुनिन्छन् । त्यही भागवत महापुराणमा भनिएको छ–
“यावत् भ्रियेत जठरं तावत स्वत्वं हि देहिनाम् ।
अधिकंयोऽभिमन्येत सःस्नेनो दण्डमर्हति ।।”
अर्थात्– जसको जतिले पेट भरिन्छ त्यत्तिमै उसको अधिकार हुन्छ । त्योभन्दा बढी जसले खोज्छ र जम्मा गर्छ त्यो चोर हो, त्यो दण्डभागी छ । राज्यले दण्ड दिनुपर्छ ।
अब प्रधानमन्त्रीजी ! आफैं विचार गर्नोस्– त्यो भागवत लेख्ने कम्युनिष्ट कि आजका कम्युनिष्ट ? आजका अगस्तिहरु त नामधारी मात्रै भएनन् त ? यहाँका विशिष्ट पदाधिकारी भनिएका भूतपूर्वहरु र आजैका सत्तासीनहरुको समेत सम्पन्नतालाई लुच्याई, शोषण अथवा बेइमानी भन्न र त्यस्ताको दण्डविधान एवं उपचार राज्यले गर्न पर्ने कि नपर्ने र गर्न हुने–नहुने के हो ? प्रधानमन्त्रीजी स्वयं जान्ने बुझ्ने हुनुहुन्छ ! धेरै के लेखम् ? जय होस् !